रिक्मीमा उपलब्ध स्वेनाइजहरू स्वचालित रूपमा घोषित गरिएको छैन, त्यहाँ समाधान छ? (विन7/ 8 +) - Rikoooo
Rikoooo मा Sceneries उपलब्ध स्वतः घोषणा गर्दै छन्, एक समाधान छ? (विन7/ 8 +)
यो प्रक्रिया Prepar3D र FS2004 दुवै काम गर्दछ।
पूर्वनिर्धारित रूपमा, FSX मा स्थापित छ «सी: \_ कार्यक्रम फाइलहरू (x86) \_ Microsoft उडान सिम्युलेटर एक्स माइक्रोसफ्ट खेल \_»। समस्या विन्डोज7र 8 + वा विन्डोज 10 मा तपाईंले कन्फिगरेसन फाइलमा लेखन देखि एक कार्यक्रम रोक्न जो भित्र «माइक्रोसफ्ट उडान सिम्युलेटर एक्स» फाइलहरू, एक पूर्ण नियन्त्रण छैन भन्ने छ। कि समस्या समाधान गर्न, «सी: \_ कार्यक्रम फाइलहरू (x86) \_ Microsoft खेल» जाने, त्यसपछि फोल्डर «माइक्रोसफ्ट उडान सिम्युलेटर एक्स» मा एक दायाँ क्लिक गर्न, त्यसपछि «सुरक्षा» ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस् «गुण»। यहाँ, छनौट «प्रयोगकर्ता (xxxxxx)», त «सुधारे» क्लिक गर्नुहोस्। विन्डो मा बस खोलियो, फेरि चयन «प्रयोगकर्ता (xxxxxx)», मा «पूर्ण नियन्त्रण», त्यसपछि «संशोधन» क्लिक गर्नुहोस्। अब, तपाईं भर्खर «ठीक» र Windows क्लिक गर्न अनुमति अद्यावधिक हुनेछ छ।
तल तस्बिर निर्देश: